Islam Virus: What do 1.8 Billion Muslims Worship ?
What do 1.8 Billion Muslims Worship ?
Is that What 1.8 Billion Muslims worship5timesaday?
Mecca Kaaba Vaginal Shaped Black Meteorite Stone (aka) Allah's Pussy !
Conclusion ; Allah is pagan crescent-moon deity.
Allah the moon god and Kaaba Meteorite Black Stone is her VG.
Allah is the Mommy-Deity with3daughters-deities named Al-lat, Al-uzza, Manat.
The black stone isavagina, why Mohammed kissed it? part -1
The black stone isavagina, why Mohammad kissed it? part-2
Moon god Allah and her3daughters Al-lat, Al-uzza, Manat.
သန်းပေါင်း၁၇၀၀ကျော် မွတ်ဆလင်များ ရောက်ရာနိုင်ငံအသီးသီး က ဗလီများတွင် တစ်နေ့ ၅ခါ ဖင်ကုန်းပြပ်ဝပ်ကိုးကွယ်ရှိခိုးပူဇော် ရသော
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ဧ။်ရုပ်ပွားတော် ဥက္ကာပျံကျောက်တုံးလေး ( Allah's Pussy )
မွတ်ဆလင်တွေကို " မင်းတို့ဗလီ မှာ ဘာကို ရှိ ခိုးပါလဲလို့ " မေးရင် ကောင်းကင် က အလ္လာဟ် ကိုရှိခိုးတာလို့ ဖြီးပါလိမ့်မယ်။
အမှန် က ဘာ ကောင်းကင် ကိုမှ ရှိခိုးတာမဟုတ်ပါဘူး။ မြေကြီးပေါ်မှာ ရှိတဲ့ ဆော်ဒီ က မက်ကာ မြို့က သူ့တို့ ရဲ့ အလ္လာဟ် ကျိမ်းဝပ်တော်မူတဲ့ ကျောက်တုံးအနက်လေး ကိုရှိခိုးတာပါ။ ရှင်းအောင်ပြောရင် အဲဒီ Kaaba Cube မှာရှိတဲ့ Vagina ပုံစံ ကျောက်တုံး အနက်လေး ဟာ မွတ်ဆလင် ဘုရားအလ္လာဟ်ပါပဲ။
Vagina ပုံစံ ကျောက်တုံး အနက်လေး ဟာ မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ အမြင့်မြတ်ဆုံး အထွတ်မြတ်ဆုံး ကိုးကွယ်ရာ အလ္လာဟ်ပါပဲ။
မွတ်ဆလင် ဗလီတက်တာ ဆိုတာ ကမ္ဘာပေါ်က ရောက် ရာ နိုင်ငံအသီးသီး ကနေ အဲဒီ Vagina အလ္လာဟ်ကျောက်တုံးလေး ကို မွတ်ဆလင်အားလုံး ဦးတိုက် ရှိခိုး ကြတာပါပဲ။ ဒါပဲ။
ဘာ ကောင်းကင် က အလ္လာဟ်ကို မှ ရှိခိုးတာ မဟုတ်ဘူး။
မြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ ဆော်ဒီ က မက်ကာမြို့ မှာရှိတဲ့ အလ္လာဟ်ခေါ် Vagina ကျောက်တုံးလေး ကို မွတ်ဆလင်အားလုံး ရောက်ရာနေရာအသီးသီး၊ ဗလီ အသီးသီးကနေ ဦးတိုက် ရှိခိုး ကြတာပါပဲ။
အဲဒီ Vagina ပုံစံ ကျောက်တုံး လေး ဟာ မွတ်ဆလင်အားလုံးးတို့ ရဲ့ဘုရားအလ္လာဟ်Allah ပါပဲ။
သမီးတော် ၃ ပါး ရှိတဲ့ မိစ္ဆာမအလ္လာဟ် က လည်း သူ့ ကို ကိုးကွယ်တဲ့ မွတ်ဆလင်တွေ တစ်နေ့ ၅ခါ ရှိခိုးပူဇော်ရအောင် မိစ္ဆာမအလ္လာဟ် ရဲ့ VG ကို မွတ်ဆလင်တွေ ကိုးကွယ်ဖို့ ပေးခဲ့ပါတယ်။
အလ္လာဟ်မှာ အကောင်အထည်မရှိဘူးလို့ ဘယ်သူပြောသလဲ။ အဲဒီမှာ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ဧ။်ရုပ်ပွားတော်မြတ် ( Allah's Pussy )
မွတ်ဆလင်တွေ ပြောတော့ မိန်းမတွေဟာ ယုတ်ညံ့တယ်၊ ညစ်ပတ်တယ်တဲ့၊
မွတ်ဆလင်တွေ ကိုးကွယ်တော့ ....
အများဖင်ပူးတောင်းထောင်လို့ လိုက်ဖင်ပူးတောင်းထောင်.. အမောင်မွတ်ဆလင် အလ္လာဟ်မှန်းမသိ၊ VG မှန်းမသိ၊
မွတ်ဆလင်တွေ ဖင်ပူးတောင်းထောင်တဲ့အထိက ပြဿနာမရှိပေမဲ့ ဖင်ပူးတောင်းထောင်တာရဲ့ နောက်ဆက်တွဲတွေ ဖြစ်တဲ့ လည်လှီးသတ်တာတို့ အလ္လာဟ် အတွက် ဘာညာ လုပ်ရမယ်တို့စသည်ဖြင့် ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ မွတ်ဆလင်မဟုတ်သူ လူသားအားလုံးအတွက် ပြဿနာဖြစ်သွားပါပြီ။
ဘယ်လောက်တောင် ယုတ်ညံ့သလဲဆိုတာ အထူးပြောဖို့ မလိုတော့ပါဘူးနော်။
ဘာသာတရား တစ်ခုလို့ တောင် မခေါ်အပ်တဲ့ အင်မတန်မှ ညစ်စုတ်၊ ယုတ်မာရိုင်းစိုင်း၊ လူတွေကို လည်လှီးသတ်ရင် နတ်ပြည်ရောက် ပြီး လိင်တူလိင်ကွဲ ၂၄နာရီဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ မကောင်းဆိုးဝါးအလ္လာဟ် ရဲ့ အစ္စလမ်အယူဝါဒ
တိရိစ္ဆာန်လေးတွေကို ရိုးရိုးမသတ်ဘူး။ လည်လှီးသတ်မှ အားရတယ်..လူကိုလည်လှီးသတ်တယ်..ကုသိုလ်ရအောင်တဲ့ ကုသိုလ်ရအောင် ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ကိုရွတ်ရင်း ကိုယ့်xင်ကိုပြန် xxိုးနေပါလား
လည်လှီးမယ့်မည့်သူဟာ မွတ်ဆလင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး စိတ်ပုံမှန်ရှိ စိတ်ကျန်းမာသူ။ (စိတ်ပေါ့သွတ်သူမဟုတ်ရ)
လည်လှီးအသတ်ခံရမည့် သတ္တဝါသည် အစ္စလမ်တရားတော်နှင့် ညီညွတ်ရမည်။ (ဝက် တောဝက် ခွေး မြွေ မျောက် ကျား ခြသေ့င်္ ဝက်ဝံ ကြွက် ကင်းခြေများ ကင်းမြီးကောက် ဖား မိချောင်း ပရွက်ဆိတ် ပျား သန်း ယင်ကောင် လောက် မြည်း လား အဆိပ်ရှိ သတ္တဝါများ မဟုတ်ရ)၊
လည်လှီးအသတ်ခံရမည့် သတ္တဝါသည် အရှင် (သို့) အသက်ရှင်နေရမည်။
သတ္တဝါကို လည်လှီးနေစဉ် နှုတ်မှ ဘစ်စမီလာဟ် Bismillah အလ္လာဟ်အရှင် နာမတော်ကို အောက်မေ့ရွတ်ဆို ပူဇော်ရမည်။
မွတ်ဆလင်မဟုတ်သူ ( လူကို ) လည်လှီးနေစဉ် ဆိုရင်တော့ Allahu Akbar အလ္လာဟ်ဟူအက်ဂ်ဘာခ် နာမတော်ကို အောက်မေ့ရွတ်ဆို ပူဇော်ရမည်
လည်လှီးသတ်ရန် ကိရိယာသည် ချွန်ထက်ပြတ်ရှသော ပစ္စည်းမျိုးဖြစ်ပြီး သတ်နေစဉ်အတွင်း သတ်သည့်ကိရိယာသည် သတ္တဝါနှင့်ကင်းကွာခြင်း မရှိစေရ (အကြိမ်ကြိမ် ခုတ်ထစ် သတ်ဖြတ်ခြင်း မဟုတ်ပဲ ကြိတ်လှီးခြင်း)
လည်လှီးသတ်ရာတွင် အသတ်ခံသတ္တဝါ၏ လည်မျိုတဝိုက်ရှိ လေပြွန်၊ အစာရေစာမျိုလမ်းကြောင်း၊ ပင်မသွေးကြောနှင့် သွေးပြန်ကြောများကိုပါ တပါတည်း ပိုင်းဖြတ်စေရမည်။ တဲ့….ခင်ဗျ။ လည်လှီးအသတ်ခံရမည့် သတ္တဝါဟာ ဘယ်လောက်တောင် ရက်ရက်စက်စက် နာကျင် ခံစားနေမလည်းဆိုတာ ခဏဝင်စဉ်းစားဖို့ပါ။
မွတ်ဆလင်မှန်ရင် လက်ယဉ်နေပြီးသား၊ လည်လှီးသတ်တာ ။ ကုသိုလ်ရတယ် ဟုတ်လား...
မွတ်ဆလင်တို့ ဧ။် အသွေးအသား ၊ ဦးနှောက်ထဲက ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှု အပေါင်းသည် ကုရ်အာန်ကျမ်း က ဆင်းသက်လာခြင်း ( ရိုက်သွင်းထားခြင်း) ဖြစ်ပါသည်။
ဒီလောက်တောင် Fighter ဖိုက်တာကျတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေ ဒါကျတော့ ဘာလို့ မလှီးရဲတာလဲ။
လူတစ်ယောက်လုံးတောင် အရှင်လတ်လတ် လည်လှီးသတ်ရဲတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေ ဒါကျတော့ ဘာလို့ သေလောက်အောင် ကြောက်ကြတာလဲ ။
လူတစ်ယောက်လုံးတောင် အရှင်လတ်လတ် လည်လှီးသတ်ရဲတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေ ဒါကျတော့ ဘာလို့ သေလောက်အောင် ကြောက်ကြတာလဲ
လူကိုလည်လှီးသတ်စရာ မရှိသေးတော့ ..နွားကိုလည်လှီးသတ်တယ်။
၉နှစ်သမီးကို မုဒိန်းကျင့်တဲ့မိုဟာမက် ကို ကိုးကွယ်တယ်။ ဘယ်လိုမှ မငြင်းနိုင်ဘူး။
" the Prophet Mohammed married 'Aisha when she was six years old and he consummated his marriage when she was nine years old "
အသက် ၅၄နှစ် အရွယ်မိုဟာမက်ဟာ သူ့ မြေးလောက်ရှိတဲ့ ရာသီတောင်မလာသေးတဲ့ ၉နှစ်ကလေးငယ်လေးကို မုဒိန်းကျင့်ခဲ့တယ်။
၉နှစ် သမီးကို မုဒိန်းကျင့်တဲ့ မိုဟာမက်လို Paedophile တဏှာရူးကြီး ကို ကိုးကွယ်မှတော့ ..အဲဒီလို ၉နှစ် သမီးကို မုဒိန်းကျင့်တဲ့ မိုဟာမက်ကို ကိုးကွယ်တဲ့ မွတ်ဆလင်တွေဆီ က ဘယ်လိုမျိုး မြင့်မြတ်တဲ့ ၊ အနည်းဆုံးလူပီသတဲ့ အပြုအမူတွေ မျှော်လင့်နိုင်မှာလဲ။
( မွတ်ဆလင်မဟုတ်သူတွေကိုသတ်နိုင်ရင် ) လူတွေကို လည်လှီးသတ်ရင် နတ်ပြည်ရောက် ပြီး လိင်တူလိင်ကွဲ ၂၄နာရီဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ မကောင်းဆိုးဝါးအလ္လာဟ် ရဲ့ အစ္စလမ်အယူဝါဒ ကုရ်အာန်ကျမ်းကို ခေါင်းထဲရိုက်သွင်းခံထားရတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေဆီက အဘယ်သို့ သော မွန်မြတ်တဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားများ ကို မျှော်လင့်နိုင်အုန်းမှာလဲ။
ရုပ်ထုဆင်းထု မကိုးကွယ်ရဘူးပြောတယ်။ ပြောရင်းနဲ့ တစ်နေ့ ၅ ခါ မက်ကာ Kaaba က ကျောက်တုံးလေးကို ရောက်ရာနိုင်ငံအသီးသီးက ဦးတိုက်ရှိခိုးကန်တော့တယ်။
ကုသိုလ်ရအောင် ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ကိုရွတ်ရင်း ကိုယ့်xင်ကိုပြန် xxိုးနေပါလား
မြန်မာတွေကို ရုပ်ထုကို ကိုးကွယ်လို့ တဲ့..
မက်ကာ က ကျောက်တုံးအနက်လေး ကို ကျတော့ မွတ်ဆလင်တွေဖင်ကုန်းပြီး ကန်တော့တယ်
ကျောက်တုံးက ကျောက်တုံးပေါ့ကွ၊ ကျောက်တုံးကို xီးမို့ လို့ ကန်တော့တာလား
မူစလင်တွေ ဒီလောက်တောင် ဥာဏ်မရှိဘူးလား။ ကျောက်တုံးက ကျောက်တုံးပေါ့ကွ၊
မွတ်ဆလင်တွေ ဘ၀ က ရှေ့က လိမ်ပြီး ..နောက် က ဟောင်းလောင်းပေါက်ကြီး
ဒါလည်း ဗြောင်လိမ်တာပဲ။ Taqiyya
မွတ်ဆလင်တွေ လုပ်သမျှဟာ ကုရ်အာန်နဲ့ မိုဟာမက်သင်ပေးထားသမျှပဲလုပ်တတ်တာ။
ဒီထက်ဘာမှ ကျော်မလုပ်တတ်ဘူး။ ကျော်လည်း လုပ်လို့ မရဘူး။
မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ ဗျူဟာ က ရှင်းရှင်းလေးပါ။
Infiltrate, Overwhelm, Subjugate, Devour
အစ္စလမ်အယူဝါဒဟာ အခြေခံ foundation မခိုင်တဲ့အပေါ်မှာ အမြင့်ကြီးတည်ဆောက်ထားတဲ့ မျှော်စင်ကြီးနဲ့ တူနေပါတယ်
အစ္စလမ်အယူဝါဒဟာ အထိမခံရွှေပန်းကန် ဖြစ်နေတာ ဒါကြောင့်ပါ
ဝေဖန်လိုက်တာနဲ့ ဝေဖန်သူတွေကို အသေသတ်တာပဲ
ထာဝရဘုရားဆီက လာတဲ့နောက်ဆုံးတမန်တော်သူတော်စင်ကြီးဆိုရင် ၉နှစ်သမီးကို မုဒိန်းကျင့်မလား။ စဉ်းစားလေ... မွတ်ဆလင်တွေ
ထာဝရဘုရားဆီက လာတဲ့နောက်ဆုံးတမန်တော်သူတော်စင်ကြီးဆိုရင် ၉နှစ်သမီးကို မုဒိန်းကျင့်မလား၊ လူတွေကို လည်လှီးသတ်ပြမလား။ စဉ်းစားလေ... မွတ်ဆလင်တွေ
ထာဝရဘုရားဆီက လာတဲ့နောက်ဆုံးတမန်တော်သူတော်စင်ကြီးဆိုရင် အသက် ၅၀ကျော်မှ မယား ၂၂ယောက်နဲ့ အငမ်းမရ မိတ်လိုက် နေမလား။ စဉ်းစားလေ... မွတ်ဆလင်တွေ
ထာဝရဘုရားဆီက လာတဲ့နောက်ဆုံးတမန်တော်သူတော်စင်ကြီးဆိုရင် အသက် ၅၀ကျော်မှ မယား ၂၂ယောက်နဲ့ အငမ်းမရ လိင် ငတ်နေမလား။ စဉ်းစားလေ... မွတ်ဆလင်တွေ
မွတ်ဆလင်မဟုတ်သူတွေကို လည်လှီးသတ်နိုင်ရင် အလ္လာဟ်ဘုံမှာ ၂၄နာရီလိင်တူလိင်ကွဲဆက်ဆံရမယ်လို့ မွတ်ဆလင်တွေကို မက်လုံးပေးထားမလား။ စဉ်းစားလေ... မွတ်ဆလင်တွေ
ခင်ဗျားတို့မွတ်ဆလင်တွေကိုယ်တိုင် အစ္စလမ်အယူဝါဒအကျဉ်းထောင်ကြီးမှာ ပိတ်မိနေတဲ့သူတွေပါပဲ။
ဒီကြားထဲ ဆွန်နီအစ္စလမ် နဲ့ ရှီးယိုက်အစ္စလမ် တို့ သူဦးသူသတ်၊ ကိုယ်ဦးကိုယ်သတ်၊ အဲဒီလို ခိုင်းစေထားတဲ့ ကုရ်အာန်အစ္စလမ်အယူဝါဒအကျဉ်းထောင်ထဲ က နေ ရုန်းထွက်ကြည့်စမ်းပါ။
တစ်ခုတည်းသောအစ္စလမ်ကမ္ဘာ House of Islam ဖြစ်လည်း ခင်ဗျားတို့ ဆွန်နီမွတ်ဆလင်၊ ရှီးယိုက်မွတ်ဆလင်တွေ သတ်ကြရအုန်းမှာပဲ။
ဟစ်တလာခိုင်းခိုင်း၊ အလ္လာဟ် ခိုင်းခိုင်း၊ မိုဟာမက်ခိုင်းခိုင်း၊ ခိုင်းတဲ့ အတိုင်းလုပ်စရာ မလိုပါဘူး။ လူမှာ ကိုယ်ပိုင်အသိဥာဏ်ရှိတာပဲ
လူသားအချင်းချင်း သတ်ခိုင်းတဲ့ မကောင်းဆိုးဝါးအစ္စလမ်အယူဝါဒ တွေကို မောင်းထုတ်ပြီးအစ္စလမ်အယူဝါဒအကျဉ်းသားမွတ်ဆလင်ဘ၀ကနေ လူပီသတဲ့လူသားစင်စစ်ဘ၀တွေကို ပြန်လည်ရယူကြည့်စမ်းပါ
လူသားမျိုးနွယ်တစ်ရပ်လုံးရဲ့ ရန်သူဖြစ်တဲ့ ကုရ်အာန်ကျမ်းစာကို မီးရှို့နိုင်တဲ့ တစ်နေ့ ၊ လူသားစင်စစ်ဘ၀ကို ပြန်ရယူနိုင်တဲ့ တစ်နေ့...
ကုရ်အာန်ကျမ်းက ရိုက်သွင်းထားတဲ့ Islamic Supremacy စိတ်ဓာတ်တွေ၊ Islamic Racist စိတ်ဓာတ်တွေ၊ Islamic Dominationစိတ်ဓာတ်တွေကို ဖျောက်ပစ်ပြီး ခင်ဗျားတို့ မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ ဦးနှောက်တွေကို ထိန်းချုပ်နေတဲ့ အလ္လာဟ်ထိန်းချုပ်မှုနဲ့ ကုရ်အာန် အမိန့် ပေးမှုတွေကို အန်တုပြီး အစ္စလမ်အယူဝါဒအကျဉ်းသားမွတ်ဆလင်ဘ၀ကနေ လူသားစင်စစ်ဘ၀ကို ပြန်ရယူနိုင်တဲ့ တစ်နေ့ခင်ဗျားတို့ ကို လူပီသတဲ့ လူသားတစ်ယောက် အနေနဲ့ လူ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းက ပြန်လည်လက်ခံကြိုဆိုနေမှာပါ။
မွတ်ဆလင်တွေ ကို နိုင်ငံအသီးသီးကို ဖြန့် ကျက်ပြီးအလုံးအရင်းစေလွှတ်၊မွတ်ဆလင်သားဖေါက်၊ ဗလီတွေ ထောင်ချီဆောက်၊ မွတ်ဆလင်လူနည်းနေရင် လျိုနေ Taqiyya ၊ မွတ်ဆလင်လူများလာရင် Jihad, ဘာသာခြားဟိန္ဒူ ၊ခရစ်ယာန် ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုရန်စ ၊ လူမျိုးတုန်းသတ်၊ ဘာသာခြားဟိန္ဒူ ၊ခရစ်ယာန် ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့ ဘာသာတွေရေးနယ်မြေတွေကို ဖျက်ဆီးသိမ်းပိုက်၊
" တစ်ကမ္ဘာလုံးအစ္စလမ်ဘာသာတစ်ခုတည်းသာ ကျန်တော့တဲ့ အထိရန်သူဘာသာခြားဟိန္ဒူ ၊ခရစ်ယာန် ၊ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုအလုံးစုံချေမှုန်းပစ်ရမယ် " ဆိုတဲ့ ကုရ်အာန်ကျမ်းညွှန်ကြားချက် အတိုင်း ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က ဘာသာခြားနိုင်ငံတွေအသီးသီးကို Demographic Jihad နဲ့ လုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့
မွတ်ဆလင်တွေ က ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ ပါဂစ္စတန်၊အာဖဂန်၊ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား တွေကိ်ု ကုရ်အာန်ညွှန်ကြားချက်အရ Islamize လုပ်ပြီးပြီ။
ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးတွေကို မွတ်ဆလင်တွေ ကုရ်အာန်ညွှန်ကြားချက်အရ လည်လှီးသတ်၊ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ဗုဒ္ဓသာသနာ့ကျမ်းဂန်တွေကို့ မွတ်ဆလင်တွေမီးတင်ရှို့ ၊
အခုနောက်ဆုံး လက်ကျန် ယဲ့ယဲ့လေးပဲ ကျန်တော့တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ နောက်ဆုံးခံတပ် ၂ နိုင်ငံ ဖြစ်တဲ့ မြန်မာနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံကိုလည်း ချမ်းသာမပေးဘူး။ အမျိုးမျိုး Islamize လုပ်နေတယ်။
မွတ်ဆလင်တွေ ထိုင်းတောင်ပိုင်းကနေထိုးဖေါက်တယ်၊ မွတ်ဆလင်တွေ မြန်မာ အနောက်ဖက် တံခါးက နေ ထိုးဖေါက်တယ်၊ ပြည်တွင်းမှာ ဗလီတွေ ရာချီဆောက်တယ်၊
မွတ်ဆလင်တွေ ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေ၊ ထိုင်းရေသောက်၊ ထိုင်းဆန်စားပြီး အိမ်ရှင်ထိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေကို ကုရ်အာန်ညွှန်ကြားချက်အရ လည်လှီးသတ်တယ်။ မွတ်ဆလင်လူဖေါက်၊ မြို့ ရွာ ပြည်နယ်တွေမှာ ရသလောက် မွတ်ဆလင်လူဦးရေ ၉၀%ဖြစ်အောင်လုပ်၊ ဒေသခံတွေ မနေရဲအောင်ဖြဲခြောက်၊
မွတ်ဆလင်တွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာနေ၊ မြန်မာ့ရေသောက်၊ မြန်မာ့ဆန်စားပြီး အိမ်ရှင်မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေကို ကုရ်အာန်ညွှန်ကြားချက်အရ လည်လှီးသတ်တယ်။ မွတ်ဆလင်လူဖေါက်၊ မြို့ ရွာ ပြည်နယ်တွေမှာ ရသလောက် မွတ်ဆလင်လူဦးရေ ၉၀%ဖြစ်အောင်လုပ်၊ ဒေသခံတွေ မနေရဲအောင်ဖြဲခြောက်၊
ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ ပါဂစ္စတန်၊အာဖဂန်၊ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား စတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွေကိုလည်း မွတ်ဆလင်နိုင်ငံတွေဖြစ်သွားအောင် ဗုဒ္ဓဘာသာကို စုတ်ပြတ်သတ်နေအောင်ဖျက်ဆီးပြီး ကုရ်အာန်ညွှန်ကြားချက်အရ Islamize လုပ်ပြီးပြီ။
အခုနောက်ဆုံး လက်ကျန် ယဲ့ယဲ့လေးပဲ ကျန်တော့တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ နောက်ဆုံးခံတပ် ၂ နိုင်ငံ ဖြစ်တဲ့ မြန်မာနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံကိုလည်း မွတ်ဆလင်နိုင်ငံဖြစ်အောင် အဘက်ဘက် က အောက်တန်းကျတဲ့ နည်းလမ်းတွေ အသုံးပြုပြီး အမျိုးမျိုး Islamize လုပ်နေတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓသာသနာ နဲ့ဟိန္ဒူ ၊ခရစ်ယာန် ၊ ဂျူး၊ ဆစ်၊ စတဲ့ ကမ္ဘာပေါ်က ရှိရှိသမျှ ဘာသာတွေ အားလုံးကို ဖျက်ဆီးပြီး ကမ္ဘာပေါ်က လူသားအားလုံးဟာ အစ္စလမ်အလ္လာဟ်ကို ကိုးကွယ်မှ ခင်ဗျားတို့Islamization ကရပ်တန့် မှာလား။
Refugees or Demographic Invaders
ဆူးလေဘုရား ( ဆူးလေစေတီတော်မြတ်ကြီး )
Coexist with Islam ? Accept Coexistence ?